အမေများနေ့မှာ သူ့ရဲ့မေမေနဲ့အတူ ကမ္ဘာပေါ်က အမေတွေအားလုံးအတွက် ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်တဲ့ နေခြည်ဦး – Cele Snap
ချစ်ရတဲ့ ပရိသတ်ကြီးရေ နေခြည်ဦးကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးချစ်ခင်မှုကို များစွာရရှိထားတဲ့ ပရိသတ်အချစ်တော် တစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ချီချီကတော့ ဒီနေ့ ပြာသိုလပြည့်နေ့မှာကျရောက်တဲ့ အမေများနေ့အတွက်ကို သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေ သူ့ရဲ့မေမေအတွက် ဆုမွန်ကောင်းတွေတောင်းပေးလာခဲ့ပါတယ်။
ချီချီကတော့ ဆုမွန်ကောင်းတွေနဲကအတူ သူ့မေမေနဲကအတူရိုက်ကူးထာတဲ့ ပုံလေးတွေကိုလည်း အမှတ်တရအနေနဲ့ ဖော်ပြထားခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် “အမေများနေ့မှာ အန်တီဆွေနဲ့အတူ မေမေများအားလုံး ကျန်းမာချမ်းသာပါစေ။ အဆင်ပြေပါစေ အေးချမ်းပါစေ။ Today isaspecial day. Happy Mother’s Day” ဆိုပြီး ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ မိခင်တွေအားလုံးအတွက်ကိုလည်း ဆုမွန်ကောင်းတွေတောင်းပေးထားပါသေးတယ်။
လတ်တလောမှာ ချည်ချည်က ရိုက်ကူးရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ အလုပ်ရှုပ်နေပေမဲ့လည်း အမေများနေ့မှာတော့ သူရဲ့မေမေနဲ့အတူ အမေတွေအားလုံးအတွက် သတိတရနဲ့ကို ဆုမွန်ကောင်းတွေတောင်းပေးခဲ့တာနော်။ ချီချီရဲ့ မေမေကတော့ သမီးလေးချီချီရဲ့ သိတက်လိမ္မာမှုကြောင့် တကယ်ကို ကျေနပ်ပီတိဖြစ်နေရမှာပဲ။ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိတ်သတ်တွေအားလုံးသာယာသောနေ့လေး တစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ လို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
ခဈြရတဲ့ ပရိသတျကွီးရေ နခွေညျဦးကတော့ ပရိသတျတှရေဲ့အားပေးခဈြခငျမှုကို မြားစှာရရှိထားတဲ့ ပရိသတျအခဈြတျော တဈယောကျပဲဖွဈပါတယျ။ ခြီခြီကတော့ ဒီနေ့ ပွာသိုလပွညျ့နမှေ့ာကရြောကျတဲ့ အမမြေားနအေ့တှကျကို သူ့ရဲ့လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာကနေ သူ့ရဲ့မမေအေတှကျ ဆုမှနျကောငျးတှတေောငျးပေးလာခဲ့ပါတယျ။
ခြီခြီကတော့ ဆုမှနျကောငျးတှနေဲကအတူ သူ့မမေနေဲကအတူရိုကျကူးထာတဲ့ ပုံလေးတှကေိုလညျး အမှတျတရအနနေဲ့ ဖျောပွထားခဲ့ပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ “အမမြေားနမှေ့ာ အနျတီဆှနေဲ့အတူ မမေမြေားအားလုံး ကနျြးမာခမျြးသာပါစေ။ အဆငျပွပေါစေ အေးခမျြးပါစေ။ Today isaspecial day. Happy Mother’s Day” ဆိုပွီး ကမ်ဘာပျေါမှာရှိတဲ့ မိခငျတှအေားလုံးအတှကျကိုလညျး ဆုမှနျကောငျးတှတေောငျးပေးထားပါသေးတယျ။
လတျတလောမှာ ခညျြခညျြက ရိုကျကူးရေးလုပျငနျးတှနေဲ့ အလုပျရှုပျနပေမေဲ့လညျး အမမြေားနမှေ့ာတော့ သူရဲ့မမေနေဲ့အတူ အမတှေအေားလုံးအတှကျ သတိတရနဲ့ကို ဆုမှနျကောငျးတှတေောငျးပေးခဲ့တာနျော။ ခြီခြီရဲ့ မမေကေတော့ သမီးလေးခြီခြီရဲ့ သိတကျလိမ်မာမှုကွောငျ့ တကယျကို ကနြေပျပီတိဖွဈနရေမှာပဲ။ဖတျရှုပေးကွတဲ့ ပရိတျသတျတှအေားလုံးသာယာသောနလေ့ေး တဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစေ လို့ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျ။